Tababare Allegri’Kooxda weydiiya inaan Sii joogayo Shaqada | Codka Bulshada Media Network	Friday, May 24th, 2013	Home
Tababare Allegri’Kooxda weydiiya inaan Sii joogayo Shaqada
Published on October 27, 2012 by admin · No Comments
Codkabulshada Media Network Sports Macalinka kooxda Ac Milan Massimiliano Allegri ayaa isku dayaya inuu mar kale sii fadhiyo kursiga keydka kooxda Ac Milan kadib markii guul darro uu kala kulmay koobka horyaalada naadiyada yurub.
Ac Milan ayaa mar kale guul darro la kulantay kadib markii ay guul darrio 1-0 ah ugu badisay kooxda Malaga oo xilligaan wac daro ka dhigayso koobkan.
Kooxda Milan ayaa laga badiyay 6 jeer 11 kulan oo xilligaan ay ciyaartay waxayna kaalin hoose kaga jirtaa horyaalka dalkeeda Talyaaniga waxaana ay guul darro kala kulmaysaa ciyaaraha yurub.
“qeybtii hore waxaa qalad ah ma samayn laakin markii lagu soo laabtay qeybta dambe ayaa dhacday qaladaad badan kadib markii aan fursado helnay kana faa’iidayn waayeen ciyaaryahanada kooxdeena ayuu yiri Massimiliano Allegri.
Massimiliano Allegri ayaa sheegay inuu ka naxay shaxda cusub 3-4-3 uu kula ciyaaray kooxda Malaga kulankan laakin uu ku guul daraystay.
“shaxdan 3-4-3 waa markii ugu horeysay oo aan ciyaarno waxa filayay inaan ku guulaysan karno laakin daafaceena ayaa liitay ayuu intaa ku daray Tababare Massimiliano Allegri.
Tababare Massimiliano Allegri ayaa waxaa saaran oo haysta cadaadis weyn wararka qaarna waxay sheegayaan in la ceyrinaayo saacadaha soo aadan waxaana kooxda si ku meel gaar ah u sii hayn doonna hadii la ceyriyo Massimiliano Allegri ku xigeenka tababare ee kooxda Ac Milan Mauro Tassotti.
“Guddoomiyaha wuu I wacay Maanta wuxuna ii shegay in xilli adag ay kooxda ku jirto ugu horeeyn waa gartay waxa uu iga rabo waa inaan dib kooxda ugu soo celiyo tartanka guulaha taasna waa samayn doona wa u sheegay ayuu mar kale yiri Massimiliano Allegri.
“walli waxaa ku jirnaa kaalinta 2-aad ee Guruubkeena koobka horyaalada yurub waana inaan diiradda saarna kulanka Genoa oo todobadkan ceyrisay tababare Gigi Del Neri ayuu ku nuux nuuxsaday Macalin Massimiliano Allegri.
Massimiliano Allegri oo la waydiiyay inuu sii ahaanayo tababaraha kooxda Ac Milan kulanka Sabtida ayuu ku jawaabay weydiiya kooxda inaan aniga sii ahaan doonno tababaraha kooxda Milan,waana ka niyad jabsanahay natiijooyinka kooxda Milan ay la kulmayso mana ahan boos ay u qalanto Milan ayuu hadalkiisa kusoo gabo gabeeyay tababare Massimiliano Allegri oo horyaalk u qaaday Ac Milan sanadkisa ugu horeeyay.